Uyenza njani i-animated ye-GIF yePhulo lakho lokuThengisa i-imeyile elandelayo usebenzisa i-Photoshop | Martech Zone
Uyenza njani i-animated ye-GIF yePhulo lakho elilandelayo lokuThengisa nge-imeyile usebenzisa iPhotoshop
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 28, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 28, 2022 Douglas Karr
Sinexesha elimangalisayo lokusebenza kunye nomxhasi ophambili weCloset52, i ivenkile yokunxiba kwi-intanethi esathi sayiphawula saza sakha ukusuka phezulu ukuya kwinkampani yefashoni esele imisiwe neyaziwayo eNew York. Ubunkokeli babo buhlala busebenza nathi kwiimbono zentsebenziswano kwiphulo elilandelayo okanye isicwangciso esisiqhubayo. Njengenxalenye yophunyezo lwabo, siye sasasaza klaviyo kuba Ivenkile yokuThengisa. I-Klaviyo liqonga lentengiso elizisebenzelayo elaziwayo elinodibaniso oluqinileyo kwiShopify kunye neeApps ezininzi zeShopify.
Eyona nto ndiyithandayo yeyam yeyabo A uvavanyo / B eKlaviyo. Unokuphuhlisa iinguqulelo ezahlukeneyo ze-imeyile, kwaye uKlaviyo uya kuthumela isampuli ngaphandle, ulinde impendulo, uze uthumele ababhalisi abaseleyo inguqulo yokuwina - konke ngokuzenzekelayo.
Umxhasi wethu ubhalisa kwii-imeyile zefashoni kwishishini kwaye uqhubeke nokuphawula ukuba bazithanda kangakanani ii-imeyile kunye nomboniso wesilayidi seefoto zemveliso. Babuza ukuba sinokwenza oko kwaye ndavuma kwaye ndakha iphulo ngovavanyo lwe-A / B apho sathumela enye inguqulelo kunye ne-animation yeemveliso ze-4, kunye nenye enomfanekiso omnye, omhle, omile. Eli phulo lokudubula ukuthengiswa kweelokhwe zabo zokuwa njengoko bezisa imigca yemveliso emitsha.
Inguqulelo A: Animated GIF
Inguqulelo B: Umfanekiso omileyo
Ikhredithi yeefoto iya kubantu abanetalente Zeelum.
Iisampulu zephulo zisaqhuba ngoku, kodwa kucace gca ukuba i-imeyile enemifanekiso epopayi iwenza kakuhle kakhulu umfanekiso omileyo… malunga. i-7% yezinga elivulekileyo... kodwa iyamangalisa Amaxesha ama-3 esantya sokucofa (CTR)! Ndicinga ukuba inyani yokuba i-GIF enopopayi ibeka izitayile ezahlukeneyo phambi komrhumi ikhokelele kwiindwendwe ezininzi.
Uyenza njani i-animated GIF usebenzisa iPhotoshop
Andilo naluphi na uhlobo lwepro enePhotoshop. Enyanisweni, ngamaxesha kuphela endiwasebenzisayo IPhotoshop yeAdobe Creative Cloud kukususa imvelaphi kunye nokubeka imifanekiso, njengokubeka umfanekiso wekhusi phezu kwelaptop okanye isixhobo esiphathwayo. Nangona kunjalo, ndiye ndagrumba kwi-intanethi kwaye ndafumanisa ukuba ndenze njani oopopayi. Ujongano lomsebenzisi kule ayisiyonto ilula, kodwa ngaphakathi kwemizuzu engama-20 kwaye emva kokufunda ezinye izifundo, ndiye ndakwazi ukuyikhupha.
Ukulungiselela imifanekiso yethu yomthombo:
amacala -Ii-animated ze-GIFs zinokuba nkulu kakhulu, ndiye ndaqinisekisa ukuba ndiseta ubungakanani befayile yam ye-photoshop ukuze ihambelane ngqo nobubanzi betemplate yethu ye-imeyile eyi-600px.
Ukunyanzeliswa -Imifanekiso yethu yantlandlolo yayisisombululo esiphakamileyo kunye nobukhulu befayile ephezulu, ndiye ndayenza ngokutsha kwaye ndayicinezela ngayo Kraken kwiJPGs ezinobungakanani befayile encinci kakhulu.
Utshintsho -Ngelixa unokuhendeka ukuba wongeze oopopayi ishumi elinambini (umzekelo. inguqu ecimayo) phakathi kwezakhelo, olongeza ubungakanani obuninzi kwifayile yakho ukuze ndinqande ukwenza oko.
Ukwenza oopopayi kwiPhotoshop:
Yakha ifayile entsha kunye nemilinganiselo ehambelana nemilinganiselo echanekileyo oyibekayo kwitemplate yakho ye-imeyile.
khetha Ifestile > Ixesha ukwenza imboniselo yexesha kwisiseko sePhotoshop.
Yongeza nganye umfanekiso njengomaleko omtsha ngaphakathi Photoshop.
nqakraza Yenza isakhelo AnimakwiNgingqi yeXesha.
Kwisandla sasekunene sommandla weXesha, khetha imenyu ye-hamburger kwaye ukhethe Yenza iifreyimu kwiLayers.
Ngaphakathi kwendawo yoMda weXesha, unako tsala izakhelo kulandelelwano ongathanda ukuba imifanekiso ivele kuyo.
Cofa kwisakhelo ngasinye apho ithi 0 sec, kwaye ukhethe ixesha ongathanda ukuba isakhelo sibonise. Ndiyakhetha 2.0 imizuzwana kwisakhelo ngasinye.
Kuluhlu olwehlayo ngezantsi kwezakhelo, khetha ngonaphakade ukuqinisekisa ukuba iilophu zoopopayi ngokuqhubekayo.
nqakraza i Dlala iqhosha ukujonga kuqala oopopayi bakho.
nqakraza Ifayile > Thumela ngaphandle > Gcina kwiWebhu (Ilifa).
khetha GIF ukusuka kwiinketho phezulu ekhohlo kwi Rhweba ngaphandle kwekhusi.
Ukuba imifanekiso yakho ayibonakali, sukukhangela i elubala ukhetho.
nqakraza Gcina kwaye uthumele ifayile yakho.
Yiyo leyo! Ngoku une-GIF enopopayi onokuyilayisha kwiqonga lakho le-imeyile.
Ukwazisa: Indawo yokulala52 ngumthengi wefemu yam, Highbridge. Ndisebenzisa amakhonkco adibeneyo kulo lonke eli nqaku Adobe, klaviyo, Kraken, yaye Shopify.
tags: vavanyozodakailifu lokudala le-adobeadobe photoshopoopopayi gifnqakraza-nge-rateilifu lokudalactreCommerceimeyile ye-ecommerceimeyile ye-gifumkhankaso we-imeyileemail MarketingUvavanyo lwe-imeyilehighbridgekwenziwa kanjaniuyenza njani i-animated gifuxinzelelo lomfanekisoklaviyokrakenumkhankaso wokuthengisaizinga elivulekileyoPhotoshopi-photoshop gifIsifundo sefotoshopthenga